Extinction Rebellion director Margaret Klein Salamon: "Chinhanho chinotevera ndechekunyepedzera kuti zvokwadi ndeyechokwadi": Martin Vrijland
Akaiswa mukati Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 10 October 2019	• 6 Comments
Kumashure kweKupandukira Kunopandukirwa kune sangano rehunyanzvi sezvatinoziva kubva mukushanduka kwemavara kwakave kuchishandiswa neCIA kwemakumi emakore kudzinga "vadzvinyiriri" uye nekuisa iyo American vhezheni yerusununguko. Iyi inzira ye 'kuratidzwa kune rugare' muzuva remambo- semhemberero yemimhanzi ine mimhanzi yakawanda uye kunzwira tsitsi kwakashata, kune yakanaka yakawanda yekuisa musasa. Chida chakakosha pakuvaka shanduko yemagariro nenhau dzevatambi vane mukurumbira. Muchiitiko ichi, iko kushanduka kwemavara, nekuti kushanduka kwemamiriro ekunze ndiwo musimboti wehurumende yenyika.
Unoda dambudziko repasi rese kuti ripe mhinduro yenyika. Saka tanga waita kuti makambani ako makuru eoyuru aunze akawanda asina kuchena mafekitori uye agadzirise magirazi ese ecola uye mabhodhoro emukaka nepurasitiki uye ave nechokwadi chekuti mvura yemakungwa inoyerera zvakazara akazara mapurasitiki. Dhani gadzira zvakare chinetso che CO2 sechikonzero chekudziya kwepasirese, chinoratidza mamwe ma walruses achizvikanda pamabwe izvo zvinonzi kushomeka kwechando uye isa musikana wechidiki akaoma ari kutamba nemanzwiro ”Unotya sei iwe!"Uye Kees agadzirira."
Yese yakarongedzwa kuburikidza nehunyanzvi akaoma musangano wepasirese. Yechokwadi nyanzvi yekuchinja sekuziva kwedu kubva kuCIA. Webhusaiti theclimatemobilization.org inoshanda se portal yesangano re The Climate Mobilization uye zviri pachena kuti kune mari hombe kumashure kwayo. Mamwe mawebhusaiti midhiya anoshandiswa kudzikisa mari yacho kusvika zvachose mbiya shoma, asi fungidzira kuti pane yakashongedzwa-yakanyatsonakirwa muchina mushure meizvi uye kuti haisi yese inoitwa pane vanozvipira. Nekudaro, hauzombooona idzo mari dzichiyerera, nekuti ndiyo nhungamiro yevanzika masevhisi: chakavanzika.
Margaret Klein Salamon chiremba wechiremba wepfungwa, saka anoziva zvishoma nezvekuridza psyche yemunhu. Zvese zvinoitika pasi pevharo re "Ini ndakanakira nharaunda", asi ngatibvunzei mukadzi akadaro kopi yemubhadharo wake wekubhadhara kana ma invoice maawa ake chinzvimbo sa Executive Director weThe Climate Mobilization.
Mune ratidziro iripazasi tinoona nzira iyo maziso eufi akasara mukamuri anovhenekera hurukuro yake yekudzidzira nezvekuchengetedza mamiriro ekunze. Anotsanangura zvakadzama kuti nzira yeboka reExpinction Rebellion iri kuita mushandirapamwe unobva pane zvepfungwa. Tinonzwa kududzirwa kwekuparadzira mashoko pano. Wobva wageza kwechinguvana kuenda ku11: 30 miniti kuti unzwe kududzirwa kwechokwadi kweaya vakadzi nevarume. "Isu tinotaura chokwadi tobva taita sekudaro chokwadi chiri chaicho", Ndizvo zvinotaurwa naAmai Salamon ipapo." Ehe, vamwe vachati iye anoreva kuti vanofanirwa kuita maererano nechokwadi, asi kutaura kwake kwakazara kunotenderera mukuvhundutsa pakati pevagari avo, mumeso ake, haavhunduke zvakakwana nezvenzvimbo iyo vanhu vanozviwana ivo pachavo. Muchokwadi, anotsanangura kuti sangano rakamiswa kumutsa kutya pakati pevanhu. Iko kutya hakuna kuringana zvachose uye vanozviziva ivo pachavo, asi nyaya iripo ndeyekuti "inofanirwa kungowedzerwa" nekuti zvikasadaro hapana chinoitika kubva kuhurumende. Nyanzvi yepfungwa padhuze wekirabhu yakadaro yemadhimoni inoshanda, haufungi?
Sangano iri zvakare riri kuitirwa nyanzvi muNetherlands. Muverengi webhusaiti ino akaenda kunotarisa kuVondelpark uye akaona maitiro iyo sangano rinotora uye nekuraira vatori vechikamu nezvechimiro chesangano uye nzira yekushanda. Zviri pachena kuti Gene Sharp Method Revolution yenyika uye vechidiki vanonyoreswa kuti vafambise zvirongwa, vasingazive kuti vari kuchera guva ravo uye vachidana mapurisa epasi rose pamusoro pazvo kuburikidza nedambudziko rakazara. Kubhadhara zvakanyanya, dzora zvese zvaunotenga uye tengesa nguva dzose kuburikidza nepasi rose (China muenzaniso) mapurisa ehurumende system.
Tiri kupupurira imwezve Gene Sharp color color nzira (inozivikanwa CIA nzira), asi panguva ino pamwero wepasi rose. Isu takaona nenzira imwechete iyoyo munguva yehondo yeYugoslavia, kumuka kweGibhithe neUkraine uye mune dzimwe nyika dzakawanda pasi rese. Iyi inzira yakanyatso kurira, iri kushandiswa muHong Kong zvakare. Isu tinoona zvakare nzira imwecheteyo kuseri kweKupandukira Kunopandukira. Iyi nzira yakagara ichikurukurwa pano pane saiti panguva yeUkraine Revolution, asi kuti zvive nyore ini ndiri kutumira vhidhiyo pano yemumwe mukadzi anotsanangura nenzira yeGene Sharp. Tarisa uone zvinongedzo zviri muchinyorwa chino kuti uwane ruzivo rwemamiriro ekunze.
Hautendi here kuti tiri kupupurira nzira yeGene Sharp CIA? Wobva waverenga quote pazasi:
Clue yekutanga huru yakauya muchimiro chemharidzo yakapihwa naGail Bradbrook, mumwe wevakatanga Extinction Rebellion (XR kwenguva pfupi - iro guru reBritish group rinotsigira Climate Mobilization) kuOff-Grid. Kunzwira tsitsi Revolution / Kukwira kumusoro! concepts / brands. Mariri, ainzi anonzi Otpor!, Ivo 'vanodzika midzi' husimbe 'vaSerbia' Bulldozer Revolution 'kana 2000, se' boka revana '. Akataurawo achipusa kana Gene Sharp, ane mazano akashandisirwa mune iyo uye yega yeinodaidzwa kuti 'ruvara kumukira' iyo yakazotsvaira munzvimbo dzakasiyana dzepasi rose, ichipera muArabhu Spring, iyo yakazofuridzira vazhinji kutora chikamu cheOpfuma yekufamba. (verenga enderera apa ..)
Source chinyorwa listings: notalotofpeoplenowthat.wordpress.com, pohu.news
Papa Francis anoshevedza vatungamiriri venyika kuenda kuVietnam pa14 muna Chivabvu 2020 kuti ipanganise nyika
Tags: Bradbrook, mamiriro okunze, dhairekita, kutsakatika, Featured, Gail, gene, Klein, Margaret, Kufambisa, vakatanga. vakatanga, chimurenga, chimurenga, Salami, Sharp, ari
Onawo vhidhiyo yazvino uye kubatana kwaJeffrey Epstein neMIT media lab uye nzira yeGene Sharp, kusanganisira kubatana neKupandukira Kunopandukira.
Hatinyadzise nazvo. Isu tiri kungoisa pachena nzira yeGene Sharp uye nekuuya nayo sechimwe chinhu chakanaka, pasina kutaura kuti yakagadzirirwa kuisa nyika yenyika mapurisa system. Iyi nzira yeCIA uye sangano rinofungidzira kuti pariri kushandisa nzira iyoyo sechinangwa chevagari vemo (uye vanhu vacho vagadzirisazve muno):
Kubhadhara mari mashandiro akadaro kunoitwa zvakare kuve neiyo accounting standard FASB 56, izvo zvinoita kuti zvinoita kuti zvimwe mari ibude. Neizvi, kugoverwa kwemari yemutero saka zviri pamutemo.
FASB 56 = DZESVONDO DZINOGARA "inobvumidza masangano ehurumende" kugadzirisa "zvirevo zvemari yeruzhinji uye kufambisa zvinoshandiswa kubva kune mumwe mutsara chinhu kuenda pane chimwe. Izvo zvakare zvinobvumidza zvinobvumidza masangano emubatanidzwa kuramba kuverenga vatero kana uye apo zvirevo zveveruzhinji zvemari zvachinjwa.
Mitero inounganidzwa pane inonzi mabhajeti, iyo, zvisinei, inoti hapana kana chekutaura nezve mamiriro emari emasangano ehurumende .. Saka, wedzera iyo Comprehensive Financial Accounting Report kune iyo FASB 56 yakajairika uye iwe unogona kubhadhara mari hombe dema.
CAFR - seti yezvirevo zvemari yehurumende yeUSA zvinosanganisira mushumo wezvemari wenyika, manisipatimendi kana rimwe sangano rehurumende rinoenderana nezvinodiwa pakurondedzerwa zvakaziviswa neHurumende Yekubvunzana Maitiro Matare (GASB).
I ME inorasikirwa mutambo wenhabvu masikati.
Iye zvino iyo ME yaive vhiki yakazara pamberi pemambakwedza, mazuva ese, kwete masikati uye 1 nzvimbo, pasina akawanda enzvimbo.
Zvakare mabheki ese aya aMI ane tangi yediziri, mabhiza, mabhazi emapurisa, mapurisa ari kuMotikoputa helikoputa? etcetra etcetra
Kupanduka kuchabhadhara sei iro, mubvunzo unonakidza
Mugovera Amsterdam 12 Gumiguru 2019
Vabati vaishungurudza vanhu nekumisikidza madziro emadziro (ivo pachavo) vane mureza kunge kana neine mureza vakaiswa nhasi pa12 Oct pane imwe nzvimbo, apo munhu wese aigona kupinda km kubvumidzwa uye kupinda maawa avakaita. ona chinongedzo telegraaf kwavakawana zvakare hombe hombe.
Ipapo munhu wese akaenda kuimba yavo inodziya imba kana vari
enderera kunotenga muKalverstraat. MeI aifanirwa kushanda nguva yakawandisa nhasi sezvo vafambi vekufamba vanga vari mumigwagwa yeRuzivo vhiki rese.
Ma ambulensi uye mabrig fire moto aifanira kuita detour, kana semhedzisiro yeizvi zvimisikidzo zvazova zvinouraya hazvisati zvazivikanwa.
Kufona nharembozha mukufambisidzana kunodhura iwe mubhadharo, kutenderera mumugwagwa unokubhadharisa faindi
kuturika mureza weNazi kuchakubhadhara faindi.
Kupandukira kutsakatika, asi ndokuzotendeuka, kwave kuratidza kuve nechine chinzvimbo chinzvimbo
Saka zvakare zvinoratidzwa kuti chakavezwa. Saka chirongwa chehurumende pachacho chinoshanda.
Zvinogona kuve zvakanyanya kujekesa!
« Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope
Kupararira Kupandukira uye kudana kwemitero yakakwira uye yakazara kutonga pamusoro pezvese zvehupenyu hwako »
Total Visits: 12.978.651
Peter Westerhout op "Zviripo sezvatinozviona" bhuku Martin Vrijland parizvino riripo
Riffian op Ruinerwold Drenthe nemhuri yake, inotevera kushanda kwepfungwa (PsyOp) vakananga kune mamwe mapurisa ehurumende
Sei uchida kuziva izvi? op 5G ine njodzi sei uye yakaiswa muchivande sei